Minisiteran’ny Vola sy tetibola: kendrena hitombo 45% ny rafitra fandraharahana momba ny vola | NewsMada
Minisiteran’ny Vola sy tetibola: kendrena hitombo 45% ny rafitra fandraharahana momba ny vola
Nametraka paikady vaovao ny minisiteran’ny Vola sy ny tetibola miaraka amin’ny Tahirimbolam-pirenena, mametraka paikady vaovao ahazon’ny Malagasy miditra bebe kokoa eo amin’ny rafitra ny fandraharahana ny vola.
Maro ny politika natao, nanomboka ny taona 2004, ho fidiran’ny olona eo amin’ny rafitra fandraharahana ny vola ( Banky, IMF*, Trano fiantohana, Caisse d’Epargne ), hahaizan’ny Malagasy mampiasa azy ireny hisian’ny fitomboan’ny harinkarena. Misy ny vokatra hita, saingy mbola maivana, koa betsaka ny ezaka miandry hidiran’ny Malagasy maro anisa amin’ireny rafitra ireny.
Natao ny SNFI (1) ho an’ny taona 2013 hatramin’ny 2017, hita fa nitombo izany amin’ny alalan’ireo rafitra mikirakira vola miparitaka manerana ny Nosy : banky miisa 11, ahitana masoivoho 345 ; IMF, misy 25, manana masoivoho 899, Trano fiantohana misy 5. Manomboka hita eto amintsika izao ny fampiasana karatra elektronika fikirakirana vola. Izao indray narafitra ny SNIM (2) ho an’ny taona 2018 hatramin’ny 2022. Tsy nahafa-po ny politika teo aloha, satria mbola 29 % ankehitriny ny Malagasy miditra amin’ireny rafitra ireny. Tanjona ny hahatafakatra izany ho 45 % amin’ny taona 2022.
Sakana iray lehibe, ny fahantrana
Tsy ampy ny fampiasan’ny olona ireny rafitra ireny, noho ny antony maro : eo ny tsy fahampian’ny fahalalana na tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra akory aza ; ny lafiny kolontsaina amin’ny faritra samihafa ; ny fahasarotana fidirana amin’izy ireny noho ny rafi-pitantanana tsy misy fiovana firy, toy ny famenoana antontan-taratasy maro. Fa ny sakana iray tena lehibe, ny fahantran’ny mponina.
Hahatrarana ny tanjona, afantoka amina paikady telo ny politika : ny fanabeazana ny olona momba ny vola sy ny fiarovana azy ireo. Iaraha-mahalala fa betsaka ny asan-dahalo mandrava ny any ambanivohitra any, ny mponina rahateo maro ny mitahiry vola an-trano na amin’ny tanàn-dehibe aza.
Faharoa, fanamorana ny olona hiditra amin’ireny rafitra ireny, entanina ny olona hitahiry, hahay hampiasa vola. Fahatelo, hatsaraina, hamafisina sy hampitomboina ny tontolo ahitana ny banky, ny IMF, ny Caisse d’Epargne … Napetraka ny komity mitantana sy mandrafitra ny fanatanterahana ny SNIM, miara-miasa amina teknisianina manadihady ny fomba fanatanterahana ny asa. Ary komity iray miara-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka teknika sy mpamatsy vola, hampitomboina ny vola miasa.
Raha fintinina, miankina amin’ny toekarena ankapobeny. Raha tsara ny fitomboan’ny harinkarena, mipaka any amin’ny vahoaka, mitombo ho azy izay fidiran’ny olona amina rafitra mpampiasa vola izay.